हाँ वा no
प्रश्न सोध्नुहोस् र जवाफ पाउनुहोस्: हाँ वा no
तपाईं प्राय: जवाफको प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ के हो? तपाई कति पटक प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ? लगभग सबैले एक दिन केहि प्रश्न सोध्छन् र तिनीहरूलाई जवाफ प्राप्त गर्न चाहन्छन्। प्राय: मानिसहरू छनौट गर्न बाध्य छन्। हो वा होइन, यी प्रश्नहरू मुख्य प्रश्न हुन्। कस्तो उत्तर बुझ्न: हाँ वा होइन, के सही हुनेछ? यदि तपाईं शङ्का गर्नुहुन्छ र छनौट गर्न सक्नुहुन्न भने, यो हाम्रो साइट भ्रमण गर्ने समय हो। र कुन जवाफ छान्नुहोस् पत्ता लगाउनुहोस्: हो वा होइन। साइटमा da-no.ru?lang=ne तपाईं कुनै प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ जुन जवाफ दिन सकिन्छ हाँ, होइन। साइट कसरी प्रयोग गर्ने?
आफ्नो प्रश्न लेख्नुहोस् र "सोध्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। केहि सेकेन्ड पछि, जवाफ हाँ हुनेछ वा छैन। निस्सन्देह, जवाफहरू अनियमित रूपमा दिइएको छ। र तपाईं यस विधिलाई पूर्णतया भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि! उत्तर सेवा YES NO इन्सेन्सनलाई हटाउन र सही निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले जवाफ NO प्राप्त गर्नुभयो भने, तर यो जवाफ प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ YES, त्यसपछि यसले तपाईंलाई भरोसा दिनेछ। यदि तपाईं जवाफ प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, तर तपाईंले YES पाउनुभयो, त्यसपछि तपाइँको प्रश्नले तपाईंलाई एक पटक फेरि बलियो बनाउन सोच्यो र तपाईंको सबै फायदेमंद निर्णय लिनेछ।
कुनै पनि अवस्थामा, सेवा YES / NO एक आश्चर्य छ र निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि जवाफहरू पूर्ण रूपमा अनियमित क्रममा दिइएको छ। र तिनीहरू अक्सर गलत छन्। तर केवल तपाईंले छनौट गर्नुभयो। साइट "YES वा NO" लाई बुझ्न को लागी सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ: हो वा होइन।